‘एनआरएनए युएइ’को नाम ‘एनए’ मात्र, कार्यालय जिसिडी अफिसमा « Postpati – News For All
‘एनआरएनए युएइ’को नाम ‘एनए’ मात्र, कार्यालय जिसिडी अफिसमा
पृथीछक बुढा मगर । हामी नेपाली एसोसिएसनको दर्तापछी युएईमा फेरि दोस्रो पटक ‘नेपाल एसोसिएसन’ संस्थाको दर्ता भएको छ । यो निकै खुसिको कुरा हो । नेपाली समुदायका हरेक क्रियाकलापहरु बैधानिक तरिकाले हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।
एनआरएनए युएईका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले `एनआरएनए´युएईको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत जानकारी दिदै एनआरएनए युएईको आधिकारिक दर्ता भएको जानकारी दिए । साथै संस्था दर्ता भएको खुसियालीमा युएई बासी नेपाली समुदायलाई बधाई दिदै आफ्नो फेसबुकमा युएई सरकारले उपलब्ध गराएको कागजात पोष्ट गरेका छन् । जसमा ‘नेपाल एसोसिएसन’ लेखिएको छ । युएईका जल्दाबल्दा समाजसेवीहरुले सामाजिक संजालमा ‘एनआरएनए’लाई बधाईको ओइरो लगाए । दर्ता भएको नेपाल एसोसिएसन तर बधाई पाउने ‘एनआरएनए’ बडो कन्फ्युजनको कुरा छ ।
दर्ताको कागजमा अगाडिको ‘एनआर’ झिकिएको अबस्थामा `एनए´ मात्रै बाकी थियो । त्यो ‘एनए’ ले बैधानिक रुपमा ‘एनआरएनए’को प्रतिनिधित्व कसरी गर्छ ? शब्दै फरक छ । अर्थ नै फरक छ । युएई सरकारले ‘नेपाली एसोसिएसन’ भनेर दर्ता दिएको छ, ‘एनआरएनए’ होइन । यो हिसावले एनआरएनए अझै अबैधानिक छ ।
अब यहाँ कुरा दुइवटा उठ्छन, कित एनआरएनको नाम फेरेर नेपाल एसोसीएसन भएको हुनुपर्छ ! कित एनआरएनए युएइ दर्ता भयो भनेर झुटको खेति भएको हुनुपर्छ !
यता गैर आवासिय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद मध्यपुर्वका उप-संयोजक गोपाल कंडेलले भने एनआरएनए युएइले सामाजिक, सास्कृतिक, खेलकुद तथा मनोरजनात्मक कृयाकलापहरु गर्न पाउने गरी यस देशको सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणपत्र हासिल गरेको बताएका छन् । एनआरएन युएइ दर्ता भएको रुपमा उनले अर्थ्याएका छैनन् । तर युएइका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले एनआरएनए युएइ नै दर्ता भएको भन्ने अर्थमा दाबि गरिरहदा कंडेलको बुझाइ र भनाइमा तुलनात्मक हिसाबले भ्रम रहित देखिन्छ ।
‘एनआरएनए’को नाम खुम्चिएर किन ‘एनए’ मात्रै रह्यो ? के एनआरएनए अबैधानिक संस्था हो ? भनेर जिज्ञासा राख्दा ‘एनआरएनए’का अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठके ‘कागज बुझाउन त एनआरएनए कै कागजात बुझाएको हो तर युएई सरकारले नेपाल एसोसिएसन नाम दियो । अब सरकारले दिएपछि लिनै पर्‍यो’ भनेर जवाफ दिनुभयो ।
युएई सरकारले एनआरएनएको नाममा संस्था दर्ता नदिनुले युएईमा ‘एनआरएनए’ अबैधानिक रहेको पुष्टि हुन्छ ।
एनआरएनए र एनए कसरी एउटै संस्था हो ? नाम त फरक फरक छ नि भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष श्रेष्टले जवाफ दिनु भयो, ‘लोगो एउटै छ । लोगोमा `एनआरएनए´ छ । यहि प्रमाणको आधारमा एनआरएनए बैधानिक संस्था हो।’
एनआर (Non Resident) लाइ युएइको कानुनले मान्यता नदिंदा नेपाली एसोसिएसन नाममा मात्र दर्ता भएको भन्ने अध्यक्षको भनाइ छ ।
यसरि हेर्दा कामकाजीका लागि दोश्रो संस्था दर्ता गरेर एनआरएनका गतिविधिहरु गर्ने/गराउने उदेश्यमा मात्र सिमित देखिन्छ । एनआरएनको नाममा सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकुद तथा मनोरजनात्मक कृयाकलापहरु मात्र गर्न प्रमाण पत्र पाएको मान्न सकिन्छन र युएइ सरकारलाइ झुक्याएर नेपाल एसोसिएसनको नाममा एनआरएनए युएइले तोकिएका गतिविधिहरु गर्ने बुझिन्छ । यसले संस्थाको विश्वासनियता कति कायम गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छन ।
युएइमा संस्थाको कार्यालय ब्यबस्थापन खर्चिलो पनि छ । लोकल स्पोन्सर, अफिसका लागि घर भाडा, अन्य कार्यालय खर्च, कर्मचारी खर्च, मसलन्द खर्च, बार्षिक फिस गरेर धेरै खर्च लाग्ने हुँदा युएइको हकमा सम्पूर्ण संस्थाहरुले एउटा संस्था दर्ता गरेर त्यसलाई कानुनि प्रमाण पत्रको रुपमा अङ्गीकार र प्रयोग गर्दै आबस्यक खर्च संस्थाहरुबाट नै परिपूर्ति गरेको भए, आर्थिक बचत हुने थियो र एकताको गतिलो सामाजिक संदेश पनि दिने थियो ।
जिसिडी ह्युमन रिसोर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेसी’को अफिसमा नेपाली एसोसिएसनको कार्यालय
एनआरएनए, एनसीसी युएईका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले आफ्नै ‘जिसिडी ह्युमन रिसोर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेसी’ (म्यान पावर कम्पनि) कै फोन नम्बर र ठेगानामा ‘नेपाल एसोसिएसन’ नामक गैर नाफा मुलक संस्था दर्ता गराउनु भयो र यहीँ नै एनआरएनए, एनसिसी युएईको दर्ता हो भनेर समेत भन्नु भयो ।
जब कि दर्ता भएको ‘नेपाल एसोसिएसन’ले यूएई बाहिरका कुनै पनि संस्थासँग सम्वन्ध राख्न नपाउने प्रावधान रहेको छ । कानुनतह एनआरएनए युएइ एनआइसिसि प्रति उत्तरदायी हुन नपाएपछी दर्ता भएको संस्था कसरी एनआरएनए एनसीसी हुन सक्छ ? अनुमती पत्रमा पनि ‘एनआरएनए’ ‘एनसीसी युएई’ भनेर कतै लेखिएको छैन ।
मलाई दर्ताको प्रमाण पत्रमा दाखिला भएको फोन नम्वरको बढी चासो छ । चासो किन राखेको हो भने म्यानपावर कम्पनी र गैर नाफामुलक संस्थाको सम्पर्क नम्वर एउटै भएपछि सेवाग्राहीले फोन गर्दा रिसेप्शनमा फोन उठाउने मान्छेले कसरी फोन उठाउँदो हो ? ‘हेलो एनए…, अथवा हेलो जिसिडी…, वा हेलो एनआरएनए… !
कार्यालय सहयोगीहरु बडो कन्फ्युज हुँदाहुन् । सेवाग्राही त झन कन्फ्युज नहुने कुरै भएन । यो कन्फ्युजनको गोलचक्करमा अल्झिएर ‘नेपाल एसोसिएसन वा ‘एनआरएनए’ले कसरी प्रस्ट भएर जनसेवा गर्ला ? हेर्न बाकी नै छ ।
युएइमा दर्ता हुने सामाजिक संस्थाहरु निजि कम्पनि जस्तै हुन्, किन भने उक्त संस्थाको स्वामित्व एउटा व्यक्तिमा निर्भर रहन्छ । अर्थात सम्पूर्ण सासन पद्दति एउटा व्यक्तिमा निहित हुन्छ । संस्था जसको नाममा दर्ता भएको छ त्यहि व्यक्ति संस्थाको रुलर हो, सर्बेसर्बा हो ।
त्यसकारण एनआरएनए युएइका लागि यो दर्ता घातक बन्न सक्छ । एनआरएन युएइ उर्फ नेपाल एसोसिएसन संस्थागत दर्ता भएपछी उक्त संस्थाको स्वामित्व केवल एकल व्यक्ति रमेश श्रेष्ठको नाममा निर्भर रहेको छ । रमेश श्रेष्ठको कार्यकाल २०१९ सम्म मात्र हो । उनको बहिर्गमन पछिको यो दर्ता प्रक्रिया के हुन्छ ? कानुनि हिसाबले पुन: अब आउने नयाँ अध्यक्षको नाममा सार्न मिल्ने प्राबधान के छ ? त्यो संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाइ थाहा होला ।
अर्कोतिर आज एउटा व्यक्तिमाथि सर्बोपरि अधिकार दिएर दर्ता गराइएको उक्त व्यक्तिले नै आगामी कार्यकालका पदाधिकारीहरु संग समन्वय भएन भने के हुन्छ ? यसले पनि संस्थालाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व चैयन हुने पद्दतिमा अड्को पर्न सक्छ, यसका लागि एनआरएन सतर्क रहन आबस्यक छ ।
एनआरएनको सट्टा नेपाली एसोसियसन दर्ता गर्दा सायद एनआरएन केन्द्रले नै स्वीकृति दिएर उक्त संस्था दर्ता भएको हुनुपर्छ । उक्त दर्ता प्रक्रियालाई हेर्दा एनआरएन केन्द्रको लागि खतराको संकेत पनि हुन सक्छ ।
हिजै देखि एउटा भावनात्मक मुद्दा जीवित छ । मध्यपुर्वका देशहरुले ‘गैर आवासीय नेपाली’ भन्ने शब्दावलीलाइ गहिरो गरि आत्मसाथ गर्न सकेका छैनन् । मध्ये पूर्वका कामदारहरुले हामी गैर आवासिय नेपाली हैनौ भन्दै आइरहेको सन्दर्भमा युएइमा नेपाली एसोसियसन (नेपाली संघ) मात्रै दर्ता हुँदा यसको गन्ध झकिएको छ । दर्ता भएपछी गल्फ देशमा बस्ने केहि नेपालीहरुले नेपाली एसोसियसन नामले आत्मासम्मान भएको अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । अर्थात हामी गैर आवासीय नेपाली होइनौ.., ‘नेपाली संघ हौ’ भन्दै खुलेर बधाई पनि दिएका छन् ।
युएइको एनआरएन दर्ता प्रकरणले बिश्व एनआरएन भित्र गम्भीर मुद्दाको बिषय बन्न सक्छ । यसले मध्येपूर्व र युरोपका एनआरएनहरु बीच कतै फाटो ल्याउने बिष बन्न सक्छ ।